Oduu Ammee!!Abiyyi ajajoota waraana waliin erga marii gaggeesse booda waraanni Humna Addaa Naannoo Oromiyaafi Humni RIB Oromiyaa lixa keessa jiru gadi dhiisee gara naannoo Tigraay deeMe akka lolu murteesseera. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee!!Abiyyi ajajoota waraana waliin erga marii gaggeesse booda waraanni Humna Addaa Naannoo Oromiyaafi Humni RIB Oromiyaa lixa keessa jiru gadi dhiisee gara naannoo Tigraay deeMe akka lolu murteesseera.
Oduu Ammee!! Abiyyi ajajoota waraana waliin erga marii gaggeesse booda waraanni Humna Addaa Naannoo Oromiyaafi Humni RIB Oromiyaa lixa keessa jiru gadi dhiisee gara naannoo Tigraay deeMe akka lolu murteesseera.
Humni addaa Naannoo Amaaraa fi waraanni Eritrea
fi RIB Tigraay ture gara Oromiyaa lixaa deemee akka lolan murteessuu isaa Oduu amma nu dhaqqabe ni addeessa.
Sababni Tarkaanfii kana Abiyyi fudhateef humna addaa Naannoo Oromiyaa irraa amantii waan dhabeefi jadhameera. Akka keessa beektonni jadhanitti waraana loliif gadi jijjiiruun kun bu’aa isaa irra miidhaa isaatu guddaadha jadhameera. Abiyyi niin nyaadhatti nyaadhamuuf deema jadhamaa jira..
Gingilchaa 53ffaa Jawar Mohammed is a Terrorist…?
Breaking News icciitii Masaraa Mootummaati miliqxee baate.
#Oduu_Ganamaa! Waraanni Shaabiyaa sakatta’insa Waraana Bilisummaa Oromoo, – https://t.co/cTilpKUnA2 pic.twitter.com/fp3v7iWLDG
— Kichuu (@kichuu24) April 11, 2021